Indiza yaseGoli iya eKapa kuSouth African Airways manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Indiza yaseGoli iya eKapa kuSouth African Airways manje
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • INingizimu Afrika Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ukubuya kweSAA kuzohlinzeka ukulingana okuningi kwezimakethe ngokwentengo yamathikithi. Selokhu ophethe wangena futhi ekuphumeni kwebhizinisi kube namandla amancane endawo futhi lokho kusho ukuthi amathikithi abize kakhulu. I-SAA ukubuyela esibhakabhakeni kuzosho amanani entengo athe xaxa futhi kuzokwenza abantu baseNingizimu Afrika abaningi bakwazi ukundiza.
Ngemuva kwezinyanga eziningi zokulungiselela, iSouth African Airways iqala kabusha imisebenzi yasekhaya neyesifunda e-Afrika.
Indiza yokuqala ehlelwe yiSouth African Airways isuka eGoli iya eKapa ngoSepthemba 23.
Izindiza nazo kulindeleke ukuthi ziqale emadolobheni amakhulu ase-Afrika - i-Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka naseMaputo.
Ukulandela izinyanga zokulungiselela ngemuva kokuphuma ekutakuleni amabhizinisi, iSouth African Airways (SAA) iqala kabusha insizakalo yasekhaya neyasekhaya e-Afrika. Owokuqala ophethe
indiza ehleliwe ukuhamba ekuseni ngovivi kusuka e-OR Tambo International eGoli kuya Cape Town Okwamanye amazwe ngoSepthemba 23 futhi ungenye yezindiza ezintathu ezibuyayo ngosuku phakathi kwamadolobha womabili. Izindiza nazo kulindeleke ukuthi ziqale emadolobheni amakhulu ase-Afrika - i-Accra, iKinshasa, iHarare, iLusaka neMaputo.
Isikhulu Esiphezulu se-SAA uThomas Kgokolo uthi, “Leli sonto liyaziqhenya futhi libalulekile kwiSAA kanye nabasebenzi bayo kanye nazo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika. Uhambo lwethu lokubuyela esibhakabhakeni belungelula futhi ngincoma abasebenzi bethu abazinikele kuzo zonke izindawo zebhizinisi bonke abanabo nababeka amahora amaningi ngaphambi kwalolu suku. Abantu kuyo yonke imikhakha yebhizinisi abafuni lutho ngaphandle kokuthi iSAA iphumelele nokuthi sakhe inkampani entsha yezindiza ngokususelwa ekuphepheni nasekuhlinzekelweni kwamakhasimende ayisibonelo. ”
Kusho uKgokolo ngenkathi South African Airways inezifiso ezinkulu ukuthi izimiso zokuziphatha ezihamba phambili kuzoba ngenye yokuphathwa kwezimali okunomthwalo wemfanelo nokuhlakanipha kanye nokuzibophezela ekwenzeni izinto obala. “Leli bhizinisi siliqala kabusha sinombono omusha wokuziqhenya ngomkhiqizo futhi osekugxilwe kuwo wonke umuntu osebenzayo. I-oda lethu lokuqala lebhizinisi ukusebenzela i-
imizila yokuqalisa ngendlela efanele futhi enenzuzo bese ibheka ukwandisa inethiwekhi nokukhulisa izimoto zethu, konke kuya ngesidingo nezimo zemakethe. ”
USihlalo weBhodi leSAA uJohn Lamola uthi, “Ukubuya kweSAA kuzohlinzeka ngokulingana kwezimakethe ngokwentengo yamathikithi. Selokhu ophethe wangena futhi ekuphumeni kwebhizinisi kube namandla amancane endawo futhi lokho kusho ukuthi amathikithi abize kakhulu. Ukubuyela kwethu esibhakabhakeni kuzosho amanani entengo athe xaxa futhi kuzokwenza abantu baseNingizimu Afrika abaningi bakwazi ukundiza. ”
Kusho uLamola SAAUkubuyela esibhakabhakeni nakho kungusizo olukhulu kwezomnotho, ikakhulukazi ngokugxila kakhulu ezindizeni zezimpahla. “Ngaphandle kwezomnotho, kunesici sokuziqhenya. Ukubona imibala yemisila yeSAA kumatiyela amazwe omhlaba akuyona nje eyakuleli kuphela kodwa nezwekazi lonke. ”
SAAUmphathi Wesikhashana: Uhwebo uSimon Newton Smith uthi, “Sisezindlela eziningi, isingathekiso sezwe; awuzange ube nomlando olula njalo, kepha uyaqina, abantu bawo bayaziqhenya ngokufanele futhi yizwe okungafanele lithathelwe phansi. Umsebenzi wethu ukukhombisa umhlaba ukuthi iNingizimu Afrika iyenyuka futhi iqala uhambo lokuthola ukululama okuphelele futhi okungcono. Siqala ngokuzithoba kodwa ngezifiso ezinkulu. ”
UChief Pilot uMpho Mamashela we-SAA uthi “Sonke esizoba phambili ebhanoyini emasontweni nasezinyangeni ezizayo siwuqonda ngokugcwele umbono omusha weSAA futhi siyaziqhenya ngokuba yingxenye yale nkathi entsha. Sizimisele ukuphelela ngokuphelele nokwenza abantu baseNingizimu Afrika baziqhenye. ”